Isonto elimnyama lamakhakhayi angama-40.000 | Izindaba Zokuhamba
UMaria Jose Roldan | | Ukuphunyuka eYurophu, General, Kukhuphuka, I-Czech Republic
Imvamisa abantu bayathanda ukuhambela izindawo ezingajwayelekile noma okungenani ukubazi uma kwenzeka sifuna ukuvakasha kubo ngolunye usuku. ESpain nasemhlabeni jikelele akukho ukushoda kwezindawo ongazijwayele, okuthi uma bekutshela ngazo uthole amaqhuqhuva, futhi ungaba namaphupho amabi ulalele nje ezinye izindaba. Abanye, abanolwazi oluthe xaxa, abagcini ngokwanele ngezindaba zalezi zindawo, kepha bafuna indlela yokuzivakashela futhi bazibonele, uma zonke izindaba abazikhulumayo ziyiqiniso noma cha.
Namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngenye yalezi zindawo engatholakala emhlabeni wonke kepha hhayi wonke umuntu onesibindi sokubheka indiza eshibhe kunazo zonke ukuze ayazi. Namuhla ngifuna ukukhuluma nawe ngeSonto lamaKhakhayi angama-40.000, noma izidumbu ezingama-40.000. Futhi yebo, lumnyama futhi luyingozi njengoba kuzwakala.
1 ECzech Republic
2 Amakhanda angama-40.000
3 Inganekwane yomhlobiso
4 Isonto lamagebhezi angama-40.000
4.1 Igalari yezithombe Isonto lamagebhezi angama-40.000
Uma ngolunye usuku ufuna ukuvakashela leli Sonto elesabekayo, kuzodingeka udlule kuphela amakhilomitha angama-90 ukusuka ePrague, eCzech Republic. Kuzofanele ufike eSedlec okuyindawo engasemaphethelweni edolobha laseKutna Hora.
Yize kungeyona indawo enhle kakhulu emhlabeni yokubuka indawo, yindawo okufanele uye kuyo uma ufuna ukuvakashela leli sonto eliyingqayizivele emhlabeni - futhi elibi kunazo zonke.
Leli sonto linezingebhezi ezingekho ngaphansi kuka-40.000 ezikhombisa izivakashi zalo ukusondela kokufa. Ungacabangi ukuthi yizingebhezi zamanga, ngoba ziyizingebhezi zezidumbu ezingama-40.000, okungukuthi, zingamathambo abantu angempela. Wonke lawo mathambo namakhakhayi ngolunye usuku abantu ababehlala emhlabeni wethu futhi benezimpilo zabo.
Lezi zinsalela zabantu kwakungezabantu bezizwe ezahlukahlukene, njengamaPoland, amaJalimane, amaCzech, abaseBelgium kanye namaDashi. Vele, kuze kube yilolu suku ngeke wazi ukuthi ukhakhayi ngalunye luphi futhi kungenzeka ukuthi inzalo yabo nayo ayazi, noma bezovakashela leli bandla elidangele.
Yize bekhuluma ngenganekwane, akekho owaziyo ukuthi ngabe yindaba yangempela noma cha, yize kunjalo ... enye incazelo kufanele ibe nomhlobiso ongajwayelekile wesonto elibi futhi elihlukile emhlabeni wonke.
Indaba ibuyela emuva onyakeni we-1.142 lapho isicukuthwane phakathi nohambo ebesilwenza sisuka ePrague siya eMoravia, sima ukuphumula eduze kwehlathi ngoba besikhathele futhi singakwazi ukuqhubeka nohambo lwaso uma singaphumuli indawo ethile.
Ukukhathala kwakhe kwakukukhulu kangangokuba walala ngokushesha, wangena ekujuleni kobuthongo. Ephusheni lakhe, kwaqhamuka inyoni kuye yangena emlonyeni yamnika umqondo wokuthi asungule isigodlo kuleyo ndawo ayephumule kuyo. Lapho iphaphama, isicukuthwane salilalela iphupho laso futhi saxhumana nezindela ze-Cistercian oda likaWaldassen, eBavaria ukuze iphupho lakhe lifezeke –ngokoqobo-.
Kwakungo-1278, induna yesigodlo, uJindrich, yathunyelwa eZweni Elingcwele lapho kwathathwa khona inhlabathi isuka eGolgotha ​​ukuze ihlakazeke emangcwabeni. Ngenxa yalokho, kwakucatshangwa ukuthi le ndawo ingcwele futhi noma ngubani ophumula emva kokufa wayeyofika ezulwini.
Kepha kamuva, isifo esinsundu ekuqaleni kwekhulu le-30.000 sabangela ukufa kwabantu abangaphezu kuka-500 XNUMX kwathi ngekhulu le-XNUMX izindela ezingaba ngu-XNUMX zafa ngaphakathi esigodlweni sezindela ngenxa yezimpi zamaHussite. Ngale ndlela, ukungcwatshwa kule ndawo kwanda kakhulu, futhi kwafika isikhathi lapho le nsimu engcwele yayingasangcwatshwa ngoba zaziziningi izidumbu futhi zazingakwazi ukubekezelela.
Kungaleso sikhathi-ke lapho amathambo abantu abangcwatshwe aqala ukusetshenziselwa ukuhlala endaweni, okungukuthi, eSontweni, kepha kulokhu ukusetshenziswa kwabo kwakuwukuhlobisa indawo. Yize umhlobiso ulula kancane, bekuyindlela yokuthi bonke labo bantu abangcwatshwe emathuneni eSonto, baqhubeke, yize bengangcwatshiwe, endaweni efanayo lapho bangcwatshwe khona ngaleso sikhathi.
Isonto lamagebhezi angama-40.000
Namuhla, isonto linamasonto ama-2, elingezansi elaziwa ngokuthi 'ithuna nokunakekelwa' futhi elingenhla elaziwa libizwa ngokuthi 'licacile futhi linomoya', emele amandla okukhanya kwaphakade. Isonto lezingebhezi ezingama-40.000 livulelekile emphakathini futhi nabo bagubha imisa ngaphandle koSuku Lwabangcwele Bonke, okungukuthi ngenxa yokuhlonipha bonke abashonile abakhona lapho, abakwenzi lokho.
Uma ngabe uhlose ukuvakashela leli sonto lifiphele kangaka kepha ongakwazi ukwenza umqondo walo ngomhlobiso walo ongajwayelekile - awuhlangene nakancane nababulali noma namasonto abulala abantu ukuhlobisa izindonga zawo -, ungabheka imininingwane ethile edabukisayo , futhi yizibani zamathambo ezikhona.
Abantu abashone osukwini lwabo bebengaze bacabange ukuthi amathambo abo angagcina eyisikhiye sokuhlobisa isonto, kungaba esontweni noma ophahleni ngesimo selambu. Amanani aze enziwa nangamathambo, ngobuciko obuyingozi.
Uma ungumuntu okholelwa ezindabeni ezejwayelekile, ake ucabange ukuthi kunezipoki ezingama-40.000 ezilenga odongeni lweSonto ukuze zihambisane namathambo akho, kepha yimuphi umphefumulo ongafuna ukuhlala eduze kwamakhulu ezinkulungwane zamathambo? Impela eSontweni, ngaphezu kwabantu abalihambelayo noma abagubha iMisa ngaphakathi, into ongayithola ukuthula, ukuthula futhi ngaphezu kwakho konke ... amathambo abantu. Yebo kunjalo, Angicabangi ukuthi yindawo enhle yokubungaza umshado noma umcimbi othile wenkolo, ngoba noma kuyisonto elinemigubho ebanjwa nsuku zonke, ngubani ongafuna ukugubha umcimbi ezimpilweni zabo endaweni efana nale? Mhlawumbe ukuqopha i-movie esabekayo ngeke kube kubi, kepha hhayi okunye. Ucabangani ngale ndawo engajwayelekile?
Igalari yezithombe Isonto lamagebhezi angama-40.000
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba Zokuhamba » Ukuphunyuka eYurophu » I-Czech Republic » Isonto elidabukisayo lamagebhezi angama-40.000
Sizohamba neqembu kule ntwasahlobo, ngingahle ngibe nentshisekelo yokuthi ungazise ngohlelo lokuthi yisiphi isitimela okufanele sisithathe ePrague futhi uma siseduze nesiteshi saleli dolobha.
Ngiyazibuza nje ukuthi ngubani owayezoshada kulelo sonto nangeHalloween